Shir looga hadlayay sare u qaadidda ganacsiga Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home GOBOLLADA Shir looga hadlayay sare u qaadidda ganacsiga Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay...
Shir looga hadlayay sare u qaadidda ganacsiga Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
Muqdisho-(SNTV)-Waxaa Shalay oo Khamiis ahayd lagu soo gabagabeeyay Magaaladan Muqdisho Shir looga tashanayay sidii ganacsiga soomaaliya kor loogu qaadi lahaa oo ay soo qaban qaabisay wasaarada ganacsiga iyo Warshadaha.
Ganacsatadii shirka ka qayb gashay oo isugu jirtay Kalluumaysato, Beeraley iyo kuwo leh Warshado yar yar oo ka kala socday Banaadir iyo Gobollada Dalka Soomaaliya ayaa intii uu kulanku socday waxay kaga munaaqishoodeen sida ugu habboon ee ay isula jaan-qaadi karayaan iskaashiyo ganacsi oo ay u dhan yihiin.
Shirkan oo ay qayb ka ahaayeen ganacsato iyo maalgashadayaal shisheeye ayaa sidoo kale lagu gorfeeyay habka ugu wanaagsan ee laysugu xiri karo Ganacsatada shisheeye iyo kuwa Dalka, si loo helo dhaqaale baaxad leh iyo shaqa abuur fiican.
Andariyano muntani, oo ku hadlaayey Magaca ganacstada Dalka talyaaniga ka socota ee shirkan ka qeyb gashay ayaa sheegey inay u yimaadeen caawinta ganacsatada yar yare ee u baahan in gacansiin iyo maalgashi la siiyo, wuxuuna ka mahad celiyey sida loo soo dhaweeyey.
Wasiir ku xigeenka wasaarada ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, Maxamed Diiriye Khalliif oo soo xirey shirka ayaa sheegey iney Dowlada Soomaalia waddo qorshe lagu tayeynayo horumarinta ganacsiga.
Wuxuuna Mr; Khalliif uga mahadceliyey Dowlada Talyaaniga ganacstada ka socota inay meesha ka saareen cabsidii Soomaalia laga qabay, isagoo maalgashadayaasha caalamkana ka codsaday inay ku daydaan Ganacsatada Dalka Talyaaniga ka socota.
Qaar ka mid ah ganacsatada maamul goboleedyada Dalka oo iyana goobta ka hadlay ayaa tilmaamay caqabadaha ku hor-gudban Dalagyada Beerahooda iney tahay fatahaado soo laalaabtay , waxany soo jeediyeen in la raadiyo xal dhibaatooyinkaasi loo bixi karo.
Previous articleMursal oo furay Kalfadhiga 4-aad ee Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle.
Next articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo sheegay in aan la aqbali doonin Qof aan shaqa tegin oo Mushaar qaata